डा. देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था : भेन्टिलेटर हटाइयो, अस्पताल परिसरमै घुमाइयो – Nepali Health
डा. देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था : भेन्टिलेटर हटाइयो, अस्पताल परिसरमै घुमाइयो
२०७५ जेठ २६ गते ९:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, २६ जेठ । गम्भीर अवस्थामा उपचाररत बरिष्ठ न्युरो सर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्यको बारेमा गएराती देखि चलेको अफवाहले परिवार दुखित भएको छ ।
उसले अस्पतालको आधिकारिक जानकारी बाहेकको अन्य सूचनामा विश्वास नगर्न समेत मिडिया तथा आम सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । अस्पतालले केहीबेर अघि प्रकाशित गरेको विज्ञप्तीमा डा देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको र सघन उपचार चलिरहेको उल्लेख छ ।
यता डा. देवकोटाकी श्रीमती डा. मधु दीक्षित देवकोटाले नेपाली हेल्थसंग कुरा गर्दै स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर तर स्थिर रहेको बताइन । उनले गएराती देखि डा. देवकोटालाई लगाइएको भेन्टिलेटर हटाइएको र आज विहान केही वेर अस्पतालको पार्कमा घुमाइएको समेत जानकारी दिइन ।
‘स्वास्थ्य अवस्था जटिल नै छ । तर हिजो राती जुन अफवाह फैलियो यसमा हामी धेरै दुखि छौँ । हामीलाई पीडा माथि झन् पिडा थपिएको छ । यस्तो सम्वेदनशिल कुरामा किन यति हल्का रुपमा लिइयो ?’ भावुक मुद्रामा डा. मधुले भनिन् ।
स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्याको आशंका भएपछि करीब ७ महिना अघि थप परीक्षणका लागि वेलायत गएका थिए । परीक्षणका क्रममा क्यान्सर पुष्टि भएपछि नेपालमै उपचार गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दै गत वैशाखमा उनी नेपाल फर्किएका हुन् ।
यस्तो छ न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको फिटनेश रहस्य
न्युरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै गम्भीर
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नयाँ निर्देशक खोज्न ‘सर्च कमिटि’